တကိုယ်လုံးကိုလှုပ်ရမ်းပြီး အပြင်းစားကကွက်လေးနဲ့ ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေးဒွန့်ပြလိုက်တဲ့ ခေးဆက်သွင်ရဲ့ ဗီဒီယိုလေး – Online News Post
တကိုယ်လုံးကိုလှုပ်ရမ်းပြီး အပြင်းစားကကွက်လေးနဲ့ ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေးဒွန့်ပြလိုက်တဲ့ ခေးဆက်သွင်ရဲ့ ဗီဒီယိုလေး
အနုပညာ လောကမှာ ဇာတ်လမ်း တွဲ‌တွေ များစွာ ရိုက်ကူး ထားနိုင်သလို ရုပ်ရှင် ကားကြီး တွေပါ ရိုက်ကူး အောင်မြင် နေတဲ့ သူလေး ကတော့ မင်းသမီး ချောလေး ခေးဆက်သွင် ပါနော်…. ။ သူမ ဟာ ပွင့်လင်းပြီး ချစ်စရာ အပြုအမူ လေး တွေကြောင့် အချိန် အတို တွင်း ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင် အား‌ပေးမှု ကို အပြည့် အဝ ရရှိခဲ့ တာ လည်း ဖြစ်ပါ တယ် ။
ခေးဆက်သွင် ဟာ ခန္ဓာကိုယ် အချိုးအစား ပိုင်းမှာ လည်း ‌ကျစ်ကျစ် လျစ်လျစ် လေးနဲ့ အရမ်း လှတဲ့သူဖြစ် တာကြောင့် ပရိသတ်တွေ အားကျ နေရတာပါ ။ ခေးဆက်သွင်ဟာ အခု လက်ရှိ မှာဆိုရင် လည်း နေပြည်တော်ကို ရိုက်ကူးရေး အတွက် ရောက်ရှိ နေတာလည်း ဖြစ်ပြီး အားလပ် ချိန်လေး တွေမှာ Tik Tok ဗီဒီယို လေးတွေရိုက်ဖြစ် နေတာဖြစ် ပါတယ် နော်……
ခေးဆက်သွင် ဟာ Tik Tok acc လေးမှာ မကြာ ခဏ ဆိုသလို လည်း သူမ ရဲ့ Tik Tok ဗီဒီယိုလေးကို တင်ပေး လေ့ရှိပြီး အခုဆိုရင် လည်း အားလပ် ချိန်လေးမှာ အပီအပြင် ဒွန့်ပြီးကပြ ထားတဲ့ Tik Tokဗီဒီယိုလေးကို တင်ပေးလာခဲ့ ပါတယ် ။ ပရိသတ် တွေအတွက် ပြန် လည် မျှဝေပေး လိုက် ပါ တယ် နော် …
source khayy satt Thwin
အႏုပညာ ေလာကမွာ ဇာတ္လမ္း တြဲ‌ေတြ မ်ားစြာ ရိုက္ကူး ထားနိုင္သလို ႐ုပ္ရွင္ ကားႀကီး ေတြပါ ရိုက္ကူး ေအာင္ျမင္ ေနတဲ့ သူေလး ကေတာ့ မင္းသမီး ေခ်ာေလး ေခးဆက္သြင္ ပါေနာ္…. ။ သူမ ဟာ ပြင့္လင္းၿပီး ခ်စ္စရာ အျပဳအမူ ေလး ေတြေၾကာင့္ အခ်ိန္ အတို တြင္း ပရိသတ္ေတြရဲ့ ခ်စ္ခင္ အား‌ေပးမႈ ကို အျပည့္ အဝ ရရွိခဲ့ တာ လည္း ျဖစ္ပါ တယ္ ။
ေခးဆက္သြင္ ဟာ ခႏၶာကိုယ္ အခ်ိဳးအစား ပိုင္းမွာ လည္း ‌က်စ္က်စ္ လ်စ္လ်စ္ ေလးနဲ႔ အရမ္း လွတဲ့သူျဖစ္ တာေၾကာင့္ ပရိသတ္ေတြ အားက် ေနရတာပါ ။ ေခးဆက္သြင္ဟာ အခု လက္ရွိ မွာဆိုရင္ လည္း ေနျပည္ေတာ္ကို ရိုက္ကူးေရး အတြက္ ေရာက္ရွိ ေနတာလည္း ျဖစ္ၿပီး အားလပ္ ခ်ိန္ေလး ေတြမွာ Tik Tok ဗီဒီယို ေလးေတြရိုက္ျဖစ္ ေနတာျဖစ္ ပါတယ္ ေနာ္……
ေခးဆက္သြင္ ဟာ Tik Tok acc ေလးမွာ မၾကာ ခဏ ဆိုသလို လည္း သူမ ရဲ့ Tik Tok ဗီဒီယိုေလးကို တင္ေပး ေလ့ရွိၿပီး အခုဆိုရင္ လည္း အားလပ္ ခ်ိန္ေလးမွာ အပီအျပင္ ဒြန႔္ၿပီးကၿပ ထားတဲ့ Tik Tokဗီဒီယိုေလးကို တင္ေပးလာခဲ့ ပါတယ္ ။ ပရိသတ္ ေတြအတြက္ ျပန္ လည္ မၽွေဝေပး လိုက္ ပါ တယ္ ေနာ္ …
Previous post တစ်ခါမှမလုပ်ဖူးတဲ့ ပုံစံလေးနဲ့အားလုံးကို အံ့သြသွားအောင်လုပ်ပြလိုက်တဲ့ သီရိရှင်းသန့်ရဲ့ အမိုက်စားဗီဒီယို
Next post ပုံစံအဆန်းတွေလုပ်ပြပြီး ကြည့်ရှုသူတွေကို ရသမျိုးစုံပေးလိုက်တဲ့ စူးရှထက်ရဲ့ အမိုက်စားဗီဒီယို